NOMA Imikhiqizo Factory | I-China NOMA Imikhiqizo Abakhiqizi nabahlinzeki
I-SMart-L40plus Izibani Zokuhlinzwa ze-LED
Ngomklamo we-lens modular, i-SMart-L inomphumela omuhle ongenasithunzi futhi ihlangabezana nezidingo eziningi zokuhlinzwa. Umzimba wonke okhanyayo ulula futhi ubeka ngokunembile.
I-SMart-L35plus Izibani Zokuhlinzwa ze-LED
SL-P40 Izibani Zokuhlinzwa ze-LED
Ngokuklanywa kwembali, i-SL-P40, SL-P30 amalambu okuhlinza aholelekile angaphendula izidingo eziningi zokuhlinza ngesici saso esiqinile futhi esihlakaniphile.
I-SL-P30 Izibani Zokuhlinzwa ze-LED
Ithebula le-XHT-D Electro-Hydraulic Operating
Itafula lokusebenza eliphelele, elinama-push push drives, linganelisa izikhungo zezokwelapha ngokufunwa ngentengo yamanani entengo, umsindo ophansi, ukusebenza okuhamba kancane nokuqinile, ukuthembeka okuhle nokuzinza.
Ithebula Lokusebenza Kagesi le-XHT-B
Ithebula Elizinzile-H7000 le-Electro-Hydraulic Operating Table
Ngokuklanywa kwezingxenye ezinhlanu zakudala, iStable-H7000 ingaphendula izidingo eziningi zokuhlinzwa. Kuyinto ephezulu engabizi isilinganiso somkhiqizo ekusebenzeni kwetafula emakethe.